Indlela yokwenza ushizi kusukela ubisi?
Curd libhekisela encane inani imikhiqizo ukuthi kungenziwa ngokushesha futhi kalula olungiselelwe ekhaya, futhi umphumela ngeke nakakhulu, uma kungekhona kangcono, kunewemakhono ezikhethekile amabhizinisi. Inkinga esiyinhloko umuntu unqume ukwenza ushizi ekhaya - ukuthola edolobheni samanje ubisi. Lokhu umbhali kanye wazama waze wancama lwalungabola ubisi uthenge esitolo, ecindezela lemon kuwo. Ngakho-ke, ukwenziwa eliphezulu ushizi kubalulekile abe ubisi evamile kusukela inkomo noma isiphuzo avalele ukuthi umkhakha wethu ukhiqiza ngaphansi brand ubisi.
Yield izaqheqhe amalitha ubisi - 300 amagremu, ngaleyo ndlela ukuthola khilogremu komkhiqizo kumele babe kancane kuka 3 amalitha ubisi evamile. Vele umbuzo zendlela yokwenza ushizi kusukela ubisi? Okokuqala, kubalulekile ukuba sinikeze ubisi ukuze omuncu, imvelo kukuvumela wenze lokhu ngezindlela eziningi, ngokuvamile, ubisi hamba muncu ngokushesha noma kamuva, ngisho noma ungenawo ukuthatha noma yisiphi isinyathelo. Uma inqubo kumele speeded up: ukubeka ubisi e ucezu black isinkwa, isipuni esigcwele ukhilimu omuncu, ukuyothenga imvubelo, i-yogurt kancane noma yogurt, nje nokucindezela kulamula ngobisi. Akubona bonke ngesikhathi esisodwa, esinye salezi zinyathelo kwanele.
Kumele kukhunjulwe ukuthi ushizi kungcono ukuthatha ubisi nokuqukethwe fat okusezingeni eliphezulu, ushizi kuyoba kahle futhi zemvelo. Thina ukuguqula ubisi ibe elibilile ubisi umkhiqizo nge eyodwa yezindlela kuchaziwe ngenhla. Ukusabela iqala ngokushesha, kodwa prokisaniya okugcwele esikudingayo usuku. Ukuqhubeka amasi kuwufanele, azibukhali ngaphezulu kuba. Ngakho, ungakwazi ukukhetha ukuthi yikuphi ushizi ukupheka - a asidi okuncane noma ephethe ukunambitheka evelele omuncu.
Siya ngqo umbuzo zendlela yokwenza ushizi ngobisi. Ukuze Gwema ohangulayo, ukushisa omuncu ubisi, okungcono ku a umusi okugeza. Kokunye imbiza, uthele amanzi, wasibeka phezu ipuleti, bese uyifaka epanini of ububanzi ezincane. Manje ubisi akuyona ncamashi elaliphansi. Njengoba kwanda lokushisa amasi sehlukaniswe amafraktjhini ezimbili - uketshezi aphuzi, serum kanye emhlophe izinhlayiya zeqhwa eliqinile - yilokhu elakha izaqheqhe. Umsebenzi wethu awukona ukuhlukanisa serum ishq. Beka phansi colander izingqimba eziningana cheesecloth uthele okuqukethwe pan. Uma udinga okuthile abanye izinjongo serum esikhundleni ngaphansi colander indawo efanele. Esikhathini serum, ngasendleleni, esitolo ezinhle kakhulu ushizi okunosawoti ezifana feta noma suluguni. Asikwazi ukuvumela okweqile ubisi omuncu, musa uwulethe ngamathumba. Okweqile izaqheqhe izinhlayiya abe nzima njengoba zenjoloba.
Ngakho esikwaziyo kakade ingxenye, njengoba ubisi ukwenza ushizi, kodwa akugcini lapho. Gauze isikhwama, okuyinto izaqheqhe olandelayo, noma kunjalo ayikwazi wring - nje hang ke futhi anikeze serum sokukhipha ngokwemvelo. Lapho bonke whey amuncekela - lo curd usulungile.
Uyabona, inkinga indlela yokwenza ushizi kusukela ubisi, ixazululwe in aphansi. Kufanele kuqashelwe ikakhulukazi ukuthi udinga ukugcina ushizi esiqandisini kuphela. Curd - evumayo imvelo kwabaningi zama-bacterium, okuyinto engelula ewusizo womuntu futhi kungabangela ukugula.
Umbuzo olandelayo yindlela yokwenza ushizi calcined? Ukupheka ke udinga ukuya ikhemisi uzithengele chloride calcium. Bayidayise amaphilisi. Yena uyahlanganyela inqubo yokukhiqiza ushizi. Okubaluleke kakhulu, qaphela ukuba ungasho amazwi ukweqisa izidakamizwa ku-calcium. Isigamu ilitha ubisi engeza eyodwa isipuni, i-calcium ngokweqile owenza ushizi ezibabayo. Umkhiqizo kwaphumela iyasiza izingane nasebekhulile. Yidla kufanele kube ngokulinganisela, engasekho amagremu 100 ngosuku kuka. amangqanga Okukhulu calcined engayitholi nsuku kungaholela iziyaluyalu umzimba. Lokho imayelana indlela yokwenza ushizi ekhaya.
"Raffaello" crab izinti - esheshayo nelula isidlo iresiphi
Imiqulu Eggplant - isidlo-Improvisation
Yini ukupheka eyodla ingane? zokupheka
Indlela ukupheka yenkomo kwesibindi
Worcestershire sauce esikhundleni nokuthi uzosinikeza kanjani ngaphandle sauce soy kanye anchovies
Indlela ukupheka yenkomo isibindi esheshayo futhi esihlwabusayo
Indlela esiphatha ngayo corn ezomile lezwaneni? I isichibi calluses ezomile
Amaholide kazwelonke eCanada. amaholide UKwenza iZinto ngeNdlela eNgakajayeleki Canadian
3D ipeni - ukuthi iyini futhi ulenzela bani?
Ihhotela Boutique "Yurievskoe Compound", Veliky Novgorod: incazelo kanye nokubuyekeza
Indlela ukushintsha i-akhawunti ku-Skype: amathiphu, iseluleko
Biography of Leonid Arnoldovich Fedun
Hunting ngezibhamu IZH 27M: izintengo, izithombe, izici kanye nokubuyekeza
Izibuyekezo kuzosiza abantu kwangempela "izindlu ilotho"?
Umbala wezinwele u-Loreal Preference - i-palette ne-rich shades
Ukukhwehlela kabuhlungu - izimpawu ezinganeni, nokuvinjelwa, ukuphathwa